Kulane Jiis oo Xasan Sheekh iyo Mahad Salaad ku eedeeyey ‘arrin halis ku ah’ naftiisa | Onkod Radio
Kulane Jiis oo Xasan Sheekh iyo Mahad Salaad ku eedeeyey ‘arrin halis ku ah’ naftiisa
Muqdisho (Onkod Radio) – Xildhibaan Cabdullahi Kulane ayaa soo saaray qoraal uu ku cadeynayo in lagala noqday ilaaladiisii oo labo ka mid ah maanta la xiray, iyagoo doonaya inay garoonka Aadan Cadde diyaarad ka raacaan.
Sidoo kale Xikdhibaan Kulane Jiis ayaa ku goodiyey in mowqifkiisa aysan ka leexi doonin cabsi gelinta uu kala kulmayo madaxda dowladda, isagoo sheegay in qorshuhu yahay in loo logo cadowga.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Taliyaha NISA mahad Salaad ayaa sheegay inay qaadi doonaan masuuliyadda wixii qalqal amni ah oo ku yimaada naftiisa.
“In la iga qaado ilaalada waa isku day cabsi gelin oo aan guuleysaneyn iyo in la rabo in la iga dhigo mid u baylahan weerarada Al-Shabaab. Madaxweynaha iyo taliyaha NISA ayaa qaadaya mas’uuliyaddaas. Waxaan doonayaa inaan adkeeyo in cabsi-gelin heerka ay doonto ha la ekaatee aysan iga hor-istaagi doonin inaan mowqifkeyga ku taagnaado,” ayuu Cabdullaahi Kulane ku qoray bartiisa twitterka.
Sida ay ogaatay Onkod Radio, ilaaladaan ayaa fasax la’aan uga dhoofi rabay garoonka, waxayna iska dhigayeen ciidan boolis ah, gaar ahaan qeybta daraawiishta, iyagoo hubeysnaa qoryaha fudud.
Xogta ay heyso Onkod Radio waxuu intaas ku dareyaa in askarta la xiray oo gaaraya labo askari ay kamid ahaayeen shan askari oo hoos tageysay Nabad-sugidda qeybta guud ee gobolka Banaadir, isla markaana si leexsan ilaalo ugu ahaa Xildhibaan Cabdullaahi Kulane.
Xildhibaannada ayaa waxaa loogu tala-galay in amnigooda ilaaliyaan ciidan boolis ah oo uu xaq u leeyahay xildhibaan kasta, waxaana loo ansixiyay xilligii baarlamaankii 9-aad.
Askarta maanta la xiray waxaa la sheegay in markii hore laga soo qoray gobolka Gedo oo awood badan uu ku lahaa Cabdullahi Kulane, xilligii Farmaajo, balse hadda waxaa la sheegay inay doonayeen in qoryaha ay la aadaan Gedo, iyagoo aan fasax ka helin taliska guud ee NISA.